जब सहायक शिक्षा कसरी प्राप्त गर्न - शरणार्थी र आप्रवासी लागि राम्रो जब भुक्तानी | USAHello | USAHello
जब सहायक शिक्षा कसरी प्राप्त गर्न – शरणार्थी र आप्रवासी लागि राम्रो जब भुक्तानी
सबै जब शिक्षा र के हजुरबुवा सहायक को कर्तव्य हो. तपाईं एक शिक्षण सहायक बन्न लिन आवश्यक कदम सिक्न.
देश भर कक्षाकोठाहरू मा, शिक्षक ठूलो कक्षाहरू प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत ध्यान दिन पर्याप्त समय उपलब्ध छैन सामना. शिक्षण सहायक जब कक्षाकोठामा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्. यो लामो समय लिन कि कार्यहरू संग विद्यार्थी मद्दत गरेर शिक्षा सहायक शिक्षकहरू समर्थन.
यो समारोह छ अन्य नाम: एसोसिएट शिक्षक, सहायक शिक्षक र pareducator.
एक स्कूल देखि सहायक जब सिकाउने एक स्कूल परिवर्तन हुन सक्छ. एसोसिएट अक्सर विद्यार्थी एक द्वारा एक वा सानो समूह मा मद्दत गर्छ. एक सुग्घर पङ्क्ति कायम. समारोह को भाग उहाँले शिक्षा ध्यान सकून् शिक्षक लागि समय प्रदान गर्न छ. काम को अन्य भाग आफ्नो काम मा विद्यार्थीहरूको मदत गर्न छ.
अन्य जिम्मेवारीहरू छन्:
प्रतिहरू काम र गृहकार्य सङ्कलन. कक्षाकोठामा र Alhaflat.thouder Aldros.tnzim कक्षा आपूर्ति देखि आवश्यकता Khash.okhz विद्यार्थी भएका विद्यार्थी संग काम. तिनीहरूले वार्षिक शिक्षा योजना Talib.mkablh परिवारका सदस्यहरूले ब्रेक र खाजा समयमा Atalib.alahrav विद्यार्थी बारेमा कुरा गर्न मा Msaadh.almsaadh गर्न आवश्यक भने हेर्न विद्यार्थीहरू हेर्न
यस प्राथमिक र मध्य विद्यालय र माध्यमिक लोक मा सहायक सिकाउने. तिनीहरूले पनि निजी विद्यालयमा काम. तिनीहरूले यस्तो विशेष आवश्यकता विद्यालय, बाल सदन र बाल हेरविचार केन्द्र, धार्मिक संगठन संग ती रूपमा निजी शिक्षा सुविधाहरु, मा काम गर्न सक्छन्.
तलब जब सहायक शिक्षण
बीच $ 19,000 गर्न $ 23,640 प्रति वर्ष को एक औसत सिकाउने पक्रने नर्सों सहयोगिहरु. भुक्तानी वृद्धि ($ गर्न 30,000 अप) बस्ने लागत rises जहाँ क्षेत्रमा.
यदि तपाईं भविष्यमा शिक्षक बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं बच्चाहरु संग काम आनन्द र यदि सहायक काम सिकाउन सिद्ध छ. तपाईं विशेष आवश्यकता बच्चाहरु संग काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यो पनि एक राम्रो पेसा हो (मानसिक विकलांग बच्चाहरु वा शारीरिक). यदि तपाईँले एउटा नयाँ विद्यार्थी संग काम गर्दै भाषा कौशल सहायक जब सिकाउन हुनेछ मा मूल्यवान छन्.
विशेष शिक्षा मा शिक्षा सहायक को कार्य बारे एक भिडियो हेर्न
गुणहरू तपाईं अधिकार
कायम राख्ने अनुशासन मा Alsber.tabaah Alodah.allotf र Altvahm.akaddrh. संचार Algid.mrn, बेचन Tkev.tostagib विद्यार्थी आवश्यकता
Alhacob.almharrat Altnzimih.mharrat Altdras.mharrat कौशल गणित र भाषा नियम मा राम्रो. पहिलो सहायता.
तपाईं सम्बन्धन एक डिग्री प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ (दुई वर्ष प्रमाणीकरण) शिक्षामा कलेज वा कम से कम दुई वर्ष भन्दा सार्वजनिक विद्यालयमा काम शिक्षण सहायक प्राप्त गर्न.
केही निजी विद्यालय वा स्वतन्त्र सम्बन्धन को डिग्री आवश्यकता छैन. तर यो संभावना छ कि केही शैक्षिक प्रशिक्षण संग काम को लागि शिक्षण सहायक. साथै, तपाईँले भविष्यमा शिक्षक बन्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो शिक्षा यस लक्ष्य तिर सार्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
कलेज, को अर्ध-व्यावसायिक शिक्षा दुई वर्ष डिग्री भर्ना प्रस्ताव वा शिक्षक वा शैक्षिक सहयोग गर्न मद्दत गर्न. तपाईं समुदाय कलेज यी डिग्री को एक प्राप्त गर्न अध्ययन गर्न सक्छौं. तपाईं दिनमा काम भने, तपाईं यी ग्रेड केही लागि अनलाइन अध्ययन गर्न सक्छौं.
नजिकैको सामुदायिक कलेज को लागि खोज तपाईं – लिङ्क https://www.careeronestop.org/LocalHelp/CommunityServices/find-community-colleges.aspx؟newsearch=true
अनलाइन आबद्ध डिग्री सिक्न – लिङ्क https://www.teachercertificationdegrees.com/degrees/associates-degree/
एक सहायक शिक्षा रूपमा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न, तपाईं दुई वर्ष कलेज को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ. तपाईं पनि प्रशिक्षण समाप्त गर्न आवश्यक हुनेछ. यो एउटा वास्तविक अलग semester मा आफ्नो कौशल खेती हुनेछ भन्ने हो. धेरै राज्य पनि ParaPro मूल्यांकन भनिने प्रमाणपत्र आवश्यक.
आफ्नो राज्य मा सिक्न ParaPro आवश्यकताहरू – लिङ्क https://www.ets.org/parapro/state_requirements
तपाईं स्कूल वा कलेजमा अझै पनि छन् भने, एक सहायक शिक्षकको रूपमा एक इंटर्नशिप लागि आवेदन पेश गर्नेछ. यो बचत हुनेछ समय पछि. तपाईं को लागि जब सहायक सिकाउन योग्य हुन छ महिना वा एक प्रशिक्षार्थी रूपमा अनुभव को एक वर्ष हुन सक्छ.
तपाईं सुरु गर्न एक उच्च विद्यालय उपाधि चाहिन्छ?अनलाइन पाठ्यक्रम मुक्त GED® लिन. साइट Schoolspring.com यो शैक्षिक कार्य को लागि एक साइट हो. पढ्न अन्य जब शिक्षा. बारेमा समान कार्यहरु पढ्नुहोस्